BO-JACK DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Boston Terrier / Jack Russell Dogs Nooc Isku Daran
'Eeygaygu waa iskutallaab udhaxeysa Boston Terrier iyo Jack Russell Terrier. Isagu waa nin aad u jecel oo dabeecad wanaagsan tan oo tamar ah . Isaguba caqli badanyahay. Wuxuu qiyaastii yahay 20 rodol oo buuxa. Wuxuu ubaahan yahay jimicsi badan. Isagu waa eey weyn oo dabaq ah. Wuxuu heystaa jaakad qurux badan oo qurux badan lehna qoorta iyo wejiga cad, oo lamid ah qaraabadiisa Boston Terrier. Aad buu u boodi karaa. Wuxuu jecel yahay tababarka dhaqdhaqaaqa. Isagu waa eey caato ah oo fiican, wax dhibaato ah oo xagga miisaanka ah ma leh Wuxuu leeyahay jaakad gaagaaban oo aad u dhalaalaya wax badana wuu daadinayaa. Isagu ma ahan eey uraya haba yaraatee. Dadka u soo gudbaya waxay dhahaan isagu xitaa uma ursado sida eey caadi ah. Aad ayuu u qurux badan yahay muruqna wuu leeyahay.
Bo-Jack ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Boston Terrier iyo Jack Russell Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Waxaan dhaley Boston Terrier (lab) iyo Jack Russell (dumar). Waxaan haysannay 7 eyyo oo halkaan lagu muujiyey iyaga oo jira 1 toddobaad. Waxaan ugu yeernaa Bo-Jacks. Runtii waa ciyaal quruxsan. Waxaan ugu yeeraa iskudhaf gaar ah Jack Russell (haween) iyo Boston Terrier (lab). Ragga reer Boston waa cabirka weyn ee reer Boston. Dhamaan eeyahaani waa guntin iyo cadaan. Calaamadaha cad waxay la mid yihiin kuwa Boston. Brindle runti si fiican ugama muuqan sawirkaan. Waxaan u maleynayaa markay sii weynaanayaan sawirka inuu si fiican u muujin doono. ' Lahaanshaha sawirka D & D's Kennel, Debbie Snyder iyo Doug Smoot, milkiileyaasha
caddaan iyo bunni bulxan eyga
Boston Terrier / Jack Russell Terrier puppy puppy (Bo-Jacks) oo halkaan lagu muujiyey asbuucii 1, jir waxaa iska leh aaladda D&D's Kennel, Debbie Snyder iyo Doug Smoot, milkiileyaasha
Boston Terrier / Jack Russell Terrier puppy (Bo-Jack), Sawir qaali ah D & D's Kennel, Debbie Snyder iyo Doug Smoot, milkiileyaasha
Bo-Jack eey yar marka ay gaarto 2 1/2 toddobaad — Hooyadeed waa Jack Russell aabihiisna waa Boston Terrier. Lahaanshaha sawirka D & D's Kennel
'Kuwani waa sawirro aan ka soo qaatay ardaygeena isku-dhafka ah ee Jack Russell / Boston Terrier, Jazmin oo jira 3 bilood. Iyadu waa isku dhafka ugu fiican ee labada taranka. Way jeceshahay orod, orod, orod oo aan la ciyaarno caruurteena markii ay dhamaysatana, waxay jeceshahay inay salaaxdo cid kasta oo dhabteeda u haysata inay ku duubto. Waxay jeceshahay inay dadkeeda u dhowaato. Weligeed ma foga. Aad bay u jecel tahay.
jack russell terrier iyo iskudhafka dachshund
Jazmin eey-ga Bo-Jack ee yar yar oo 3 bilood jir ah iyada toy mujuruca .
'Kani waa Jack Russell iyo Boston Terrier isku dhafka ah ee loo yaqaan Belle intii ay ku guda jirtay ku ciyaarista gogol-dhigga adeerkay. Waqtigaas waxay ku jirtay meesha ugu sarreysa Aad ayey u firfircoon tahay laakiin sidoo kale waqti ayey ku qaadataa inay seexato waxayna jeceshahay inay qaar daawato TV muujinaya. Belle ma ahayn eey sahlan oo la tababaro runtiina wali waxay ku jirtaa geeddi-socod ay isugu dayayso inay hesho ciyey, qodid iyo astaamo kale oo wanaagsan iyada ayaa gacanta ku haysa. Waxaan isla sameyneynaa tan, laakiin iyadu waxay leedahay maskaxdeeda. Iyadu waa 1 1/2 sano jir ah sawirkan, waxay jeceshahay alaabada carruurtu ku ciyaaraan ee qosolka badan iyo qabashada ciyaarta, waxay ku booddaa dhabta dhabta inta aan joogo kombiyuutarka waana ku dhaaran karaa haddii ay suulaal laheyd inay kumbuyuutarka ka shaqeyn laheyd. Belle wuu caqli badan yahay laakiin wuu noqon karaa madax adag ... laakiin iyadu jecel in la jeclaado jacaylna sii oo waan u diyaargaroobay!
'Kani waa eeygayga Molly Moo oo jira 4 sano. Hooyadeed waxay ahayd Boston Terrier aabaheedna wuxuu ahaa Jack Russell Terrier. Waxaan ka helnay iyada oo hal sano jir ah saaxiibkeed oo ku nool beer. Saaxiibkeen Jack Russell wuxuu 'damacday' deriskiisa Boston Terrier markii qashinku soo baxay, saaxiibkay wuxuu dareemay dambi badan inuu qaatay mid ka mid ah eeyaha. Sidii ay noqotay (faa iidadeena), waxay ku dambeeyeen in aysan awoodin inay ku sii hayaan beerteeda maxaa yeelay waxay sii qodaysay hoostiisa xayndaabka digaagga iyo digaagga la laayo . Eeyga ninkayga ayaa goor dhow dhintay sidaa darteed saaxiibkii wuxuu na weydiiyay haddii aan rabno eey kale. '
'Sidaas ayuu ku bilowday xiriirkii jacayl ee ninkayga, aniga iyo Molly. Iyadu waa eey aad u xiiso badan oo aad u jecel oo daacad ah. Ciyaarteeda ay jeceshahay waa xadhig gunti ah oo aan bil kasta u beddelo burburintiisa. Waa inaan iibsadaa xadhigga eyga 150-rodol ah (Molly waa qiyaastii 28 rodol) maxaa yeelay hadday ka yar tahay taas, waxay ku kala jajaban doontaa 2 maalmood gudahood. Molly waxay neceb tahay roobka waxayna si dhib yar ugu dulqaadataa barafka. Waxay u egtahay bisad iyada oo raadineysa qorrax ka soo baxa guriga oo ay dhex jiifato saacado. Madadaalada ay jeceshahay waa inay ku fariisato gacanta kursiga oo ay kaliya eegtaa albaabka dambe ama daaqada hore. Waxay si xiiso leh u daawataa markasta oo gaari, qof ama xayawaan ay soo galaan aaggeeda daawashada. Waxay ku fiicnaan laheyd sida eey booliis oo ku saabsan shaqooyinka. Waxaan dhibaato weyn oo bar ah ku qabnay barxadeena ilaa aan ka helnay Molly. Waxay ku fiicantahay soo qabashada jiirarka ay asxaabteydu rabaan inay kireystaan ​​maalintaas si ay iyadu u banneeyso deyrkooda sidoo kale.
'Molly aad ayey u badan tahay ayada oo aan fiidkii daawaneyno TV-ga fiidkii iyada oo hurdada ay ugu jeceshahay ay kala fidsan tahay labadeena sida ay tahay eeyga kulul oo annaguna aan bun nahay. Xaqiiqdii waxay leedahay nooc ka mid ah noocyada kala-goynta ah ee ay sameyso markii aad xoqayso runtiina way ku qanacsan tahay.
sawirada shilinta eeyaha
Waxay xoogaa yar qaniinsan tahay si labadeeda cir ee hoose ay had iyo jeer muujiyaan. Way jeceshahay socod lugee oo aad raacdo gawaarida. Waxaan isku dayaa inaan la socdo dhowr jeer asbuucii. In kasta oo ay taranta tahay, haddana iyadu waa eey aad u deggan oo aan marar badan ciyi jirin. Laakiin markay shaqo hesho, iska ilaali, maxaa yeelay ciyaarta si aad ah ayey u qaadataa. Caadi ahaan xilligan waxay u ordaa inay soo hesho tooydeeda xadhigga ah si ay u qaadato ka soo baxdo gardarradeeda . Molly waa wax fudud oo eey cajiib ah mana qiyaasi karo inaadan ku haysan qoyskeena.
Molly Moo the Bo-Jack da'da 4 sano
maxaa eey eygu sankiisa u badalayaa bunni
olde somali ingiriis bulldog mix
casaan casaan cad